သာမန် တောင်ယာ စပါးထက် တင်း ၃ဝ ပိုထွက်နိုင်သည့် စပါးမျိုးကို လိပ်သိုတောင်ပေါ်တွင် စိုက်ပျိုး? - Yangon Media Group
သာမန် တောင်ယာ စပါးထက် တင်း ၃ဝ ပိုထွက်နိုင်သည့် စပါးမျိုးကို လိပ်သိုတောင်ပေါ်တွင် စိုက်ပျိုး?
ကရင်ပြည်နယ်၊ လိပ်သိုတောင်ပေါ်ဒေသတွင် သာမန်တောင်ယာ စပါးထက် တင်း ၃ဝ အထက် ပိုမိုထွက်ရှိနိုင်သည့် စပါးမျိုးစိတ်အသစ်ကို စတင်စိုက်ပျိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်ကြီးမြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။ ယင်းကဲ့သို့ စပါးမျိုးစိတ်အသစ် စိုက်ပျိုးနိုင်ရန်အတွက် ကရင်ပြည်နယ် သံတောင် ကြီးမြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်ဦးစီးမှူးရုံး၌ လိပ်သိုမြို့နယ်ရှိကျေးရွာများမှ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ တောင်သူကိုယ်စားလှယ်များအား အထွက်နှုန်းကောင်း တောင်ယာစပါးမျိုး ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးနိုင်ရန်အတွက် မျိုးကောင်းမျိုးသန့်မျိုးသစ် တောင်ယာစပါးမျိုးသစ် ထောက်ပံ့ပေးအပ်မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သံတောင်ကြီးမြို့နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန မြို့နယ်ဦးစီးမှူး ဦးသိန်းထိုက်မင်းက ”ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်း လိပ်သိုဒေသရှိ ကျေးရွာများတွင် တောင်ယာစပါးများ ဗီဇနိမ့် ကျလာပြီး အထွက်နည်းခဲ့ပါတယ်။ ယခုနှစ်မှာ တောင်သူများကို အထွက်နှုန်းကောင်း မွန်သောမျိုးသစ်များ ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက် အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးခြင်းဖြစ် ပါတယ်။ ယခုမျိုးစပါးကို တောင်ယာစပါး အများဆုံးစိုက်ပျိုးကြသော လိပ်သိုဒေသသို့ စတင်ပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု မေ ၇ ရက်က ဒီမိုကရေစီတူဒေးစာသို့ ပြောသည်။ အဆိုပါစပါးမျိုးကို စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနမှ အမျိုးသားမျိုးစေ့ကော်မတီ((N.S.C)တွင် မူရင်းအမည်(Ja-tiluhur)အဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် တင်ပြထားပြီး ကယားပြည်နယ် ဖရူဆိုမြို့၌ စမ်းသပ်စိုက်ပျိုးရာ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ကြောင်းလည်း သိရသည်။
ကရင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစောဗစ်တာခလိုက်က ”မျိုး စပါးသစ်ဖြန့်ဝေခြင်းက တောင်သူများအတွက် အကျိုးရှိပြီး ဒေသအတွက် အောင်မြင် ဖြစ်ထွန်းမည်ဟု ယုံကြည်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ လိပ်သိုတောင်ပေါ်ဒေသတွင် မျိုးပွားရန် ယခုနှစ်မှစတင်၍ စိုက်ပျိုးမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါစပါးမျိုးသစ်သည် သာမန်တောင်ယာစပါးထက် တင်း ၃ဝ အထက် ပိုမို ထွက်ရှိနိုင်ပြီး အအေးဒဏ်နှင့် ရေငတ်ဒဏ်ခံနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနက အဆိုပါဒေသရှိ ကျေးရွာ ၂၅ ရွာအတွက် စပါးမျိုး တင်း ၁ဝဝ ကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကာဒစ်ဖ်နှင့် တန်းတက်ခဲ့သည်မှာ နည်းပြဘဝ အကောင်းဆုံး အလုပ်ဟု ဝါးနော့ခ်ကြုံးဝါး
ထန်းတပင်စက်မှုမြို့တော်စီမံကိန်း၏ ရလဒ် အကောင်းအဆိုးကို တာဝန်ယူမည့်အဖွဲ့ လွှတ်တော်သို့တင်ပြရန် အကြံပြု
အဝေးပြေးဝင်းမှ အငှားယာဉ်များကို စနစ်တကျဖြစ်စေရန် ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကို သီးခြားဖွဲ့ပြီးြ?
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသားများအပေါ် ခရီးသွားလာခွင့် တားမြစ်ချက်များကို က??